Resaky ny mpitsimpona akotry : toe-tsaina diso toetrandro | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : toe-tsaina diso toetrandro
Par Les Nouvelles sur 13/06/2016
Tsy ampy ve ny faharatsian’ny toe-dàlana eto andrenivohitra, eo ireo lavadavaka tsy tambo isaina etsy sy eroa, ny kitaontaona manerana ny arabe, no mbola ampiana trotraka hatrany amin’ny fambolena sakantsakana manohitohina ny fizorana ? Etsy Ankadivato izao dia nasiana ireny vohitra mitsivalana manery ny mpamily hampihena ny hafainganam-pandehany ireny. Fa dia afaka mirimorimo toy ny inona moa ny fiara eto amin’ity tànana ity, ary nitera-doza inona ny fisosasosana tafahoatra eo amin’io toerana io ? Inona ary ny antony ? Izay dia lasa niteraka ny fosafosa. Ngetroka be sitrapo hono no naniraka ny fanaovana ireo sakana roa ireo eo amin’ny fihaonan-dàlana mivily any amin’ny fonenany. Asa izany na tompom-pahefana ambony na mpanefoefo tsy manam-petra. Fa na iza izy na iza dia efa fanjakazakana ny fanaovana izany. Maro loatra ireo adidin’ny fanjakana foibe tsy efa amin’ny fanajariana ny arabe, tsy ahafahany hitsingoloka amin’ny asa an-tsipiriany toy izao. Toy izany koa ny eo anivon’ny kaominina. Mihoatra ny andraikitin’ny fokontany koa ny fanatanterahana izany. Tsotra ary mazava. Fanatanterahana sitrapon’olona tompotompoina ! Tompotompoina ? Vaolaza teo. Izany hoe mbola mitoetra ny toe-tsaina fanompona. Ahoana moa raha manjaka izany fomba izany eto amin’ny fiarahamonina no tsy samy hanandrana fanao arakin’izay fantany koa ny tsirairay ?
Tsy mila mandeha lavitra akory fa eo amin’iny arabe voaresaka iny dia maro ireo mpitondra fiara mandika ny lalàna. Eto an-toerana dia tsy misy intsony izany marika fampahafantarana ny fitsipika mifehy ny fizorana izany (panneau de signalisation). Samy mandeha anjambany arak’izay tadidiny ny be sy ny maro.
Fantatra arak’izany fa voarara ny fizorana miakatra iny arabe manamorona an’Ankadivato iny, miala avy eo Bel’Air hatrany Antsahabe. Eny antsefatsefany eny anefa, firifiry ireo mpamily mangalatra mitsoriaka mampiseho fahasahiana mitodi-doha any amin’ny fizorana voarara? Izay ampahan-dàlana kely iny ve hoy ny sasany dia tsy hifandeferana ? Misy marina izany, indrindra moa raha dinihina avy amin’ny fijerena ny fikatson’ny fifamoivoizana. Azo lazaina fa noho ny zava-misy dia samy mandika samy mandefitra.
Eo ankilan’izany samy miandrandra izany tany tan-dalàna izany ny rehetra. Ny làlana anefa tsy mandefitra ary tsy hay animbihana. Ny tsy fampiharana hentitra ny lalàna angamba dia avy amin’ny tsy fahafahan’ny mpampihatra azy hanefa izany adidiny izany. Tsy afaka hiseho ho saro-piaro mantsy raha ny tena koa mba manimbika.